Waa maxay xiriirka ka dhaxeeya qofka Somaliga ah iyo dhulka uu ku noolyahay - iftineducation.com
iftineducation.com – Waa maxay xiriirka ka dhaxeeya qofka Somaliga ah iyo dhulka uu ku noolyahay
Waligaa intaad soo toostay subaxnimo circa oo aan daruur lahayn oo midabka bluugga ah wada eekaayay ma fariisatay xeeb ka mid ah xeebaha Somalia ee ma la kulantay qorraxda oo barked aad mooddo in ay biyaha madaxa kala soo baxday.Qofkii ila joogay maalintaa baa iiga marqaatiya inay aheyd wax aan la iloobi Karin oo ku haray maskaxdeenna.
Xusuus aan go’ayn bey noqatay maskaxdeenana meel bey ka degtay oo aan laga saari Karin abidkeed.Muddoo laba daqiiqa ah ayaan ku mashquulnay quruxda dabeecadda oo aan kala dhex taagneyn halka ay iska galaan galbeedka badweeynta Hindiya iyo iyo cirifka bari ee qaaradda Afrika ama loo yaqaan Geeska Afrika Waa markii uu lahaa oo kale Abwaanka Somliyeed “Dhanka bari baddii tahay bidixduna dhir iyo doog”.
Xusuus baan ka reebay oo sawir dad kale ila qeybsadaan baan ka hayaa – faan beey u tahay qof kastoo Somali ah inuu qabo dhul iyo bad saa u qurux badan
Waxaan isku dayaya inaan seddex jeer qeexo xiriirka qofka Somaliaga iyo hantida uu leeyahay kana indha la’yahay.
1. Somali baad tahay waxaad ku nooshahay dhul baaxaddiisu dhantahay 637,657km², waxaadna ku dhexnooshahay dad tiradoodu dhantahay 10,428,043 taasoo macneheedu yahay in 16kii qofba ay u helayaan 1km².
Marka aan saa u hadlayo waxaan rabaa in aan muujiyo wax uu bani aadamku hantiyo waxaa ugu qaalisan dhulka, wuxuusa u baahanyahay in la xafitto lagana ilaashado xaalifunta, si uu u suurtageliyo nolol xilliga la joogo ku filan dadkiisa mustaqbalka dheerna sii hayn kara.
Dhulka waa hanti dad leeyahay ee ma aha wax un lagu dulsocdo oo kali ah ama la daawado una baahan in si wada jir ah looga shaqeeyo ,ee aan lagu dul diririn. Anigaa leh wax ma tartee waxaa u hiiliya kan wax ka soo saara kana ilaaliya nabaad guurka , ogna inay noloshiisa isaga ku tiirsantahay.
2. Somali baad tahay waxaad leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo dhererkeeda lagu qiyaasay in ka badan 3,300 oo km. Waxaa kaa maqan aqoon aad ku urursan lahayd kheyraadka baddaada hoos jiifa . Ubadkeenna looma dhigo cilmiga badaha manaahijteennuna waxay ku saleysan yihiin kuwii uu nooga tagay gumeysigi.
Galbeedka Badweynta Hindia maxay kala maqantahay ummadda Somaliyeed oo aan laga faa’deysan:
Waxtarka badda in la ogaado waa shey muhiimah. Dhan gaadiid waa looga faaideysan karaa, waliba anngu kuma sii jirno oo kumaakun oo mail ayeey badeecado u kala gudbin kartaa waddanka gudihiisa. Ganacsatada Somaliyeed wey maalgashan karaan fursaddan ugubka ee aan lga faa’ideysan. Dowladda lafteeda waxaa laga rabaa in ay isku howsho sidii ay tuunada ugu dhoofin lahayd dibadda
3. Somali baad tahay waxaad leedahay xoolaha ugu badan Qaaradda Afrika kuwaa oo isugu jira Lo’, Ari, Ido iyo Geel oo ay nolosheennu qarniyaal ku tiirsanayd. Waxaad u soo guurtay magaalo adigoo soo dayacay meherd wax lagu faano ah in ka badan qarniyaal, taasoo ahayd xoolo dhaqashada.
Mouduucaan waan ku dheeraan doona maxaa yeelay waa meesha ay wax ka qaldan yihiin oo sixidda u baahan haddi la rabo in dhaqaaleheennu madaxa la soo kaco.
Xiriirka Dhulka Hooyo iyo Qurbajoogta
Waxaad tahay Somali waxaad ku noolann kartaa dibadda dalka ama gudihiisa , ogoow meel kasto oo aad joogto Somali baad tahay. Dad baa waxay ku andocoodaan waxaan ku dhalannay dalka ingiriiska ama waxaan haysanna bassaboor Ingiriis ah sidaa darteed waxaan nahay muwadiniin Ingiriis ah. Laguuma diidana inaad noqoto muwaadin waddan kale sida ay dhigayaan sharciyada caalamka. Lakin mid meesha ku dar ma ahid halka aad cagaha ku haysid ha noqto Kanada, Sweden, Mareykan ama Ingiriis – xaqiiqadii waxaad tahay halka uu ku aasasanyahay ama ku duuganyahay owoogaagi lixaad. Iskama dhahyo hadalkaa ee waxaan u hayaa daliilo rumeyn kara oo maxay yihiin. Waxaan arkay madaxweynayaal Mareykan ah oo soo booqanaya dalka Irland isagoo halkaa moogama 7 fac haddana aanay weli ka lumin xusuusta halka uu ku aasaa awoowgii 7 aad
Dabcan beni aadamku dhaq dhaqaaq ayuu sameeya – xilligan la joogana wuxuu ku gaari karaa dunida dacalladee 24 saacadood gudeheeda
Waa maxay dhaxalka nool
Waa qaab nolooleed ay kaaga tageen dadkii kaa horreeyay welina lagu dhaqmmo- marka la hubiyay waxtarkooda aan marna laheyn dhaliil lagu baddalo in wax lagu kordhiyo mooyee.
Oo maxaa ka mid ah haddaan isweydiinno : waxaa ka mid ahaa maacuunta ay ku isticmaali jireen guriga oo aad mooddo inay kala muhimsanaayeen wax qabadkooda
Ha sugiwaayin waxaa Halkan kuugu hayaa farsamaDa ay soo kordhisay Qalabka guryaha looga dhaqmo ama waqtigan loo yaqaan maacuunta guriga , kaasoo muddo soo jiray welina jira – laakin u muuqdo inuu sii gabaabsi isticmaalkiisa haddaanu ilaahay u bixin dad u kaca oo nadnaadiya.
Maxaad ka taqaan sheyga aan tilmaamayo ee ku yiimid caqli somaiyeed oo nadiif ah salimna ka ah fikrado meelo kale laga soo min guuriyay – waxey caddeyn marqaati ma doonta ah u tahay in qofka Somaliga wax ku soo kordhin nolo maalmeedka uu wajahayo waana tan keentay inuu sameysto maacuuntiisa Guriga Isagoo kaashanyo dabeecadda ku hareereysan. Qaarkood sahal bey u muuqdaan sameyntooda , qaarbaadse la yabeeysaa jidka loo soo maray sameyntooda. Aan soo qaato dhiisha iyo sida ay ku timid sameynteeda – cilmi aan sahlaneyn baa halkaa ku jira waxaana ammaanteeda inta badan u hoyaneysa dumarka Somaliyeed oo aan loo tegin nemeystirkeeda dabo iyo dacal – toloow imisey ku qaadatay waa howl I sugeysaa jeclahayna inaan ka jawaabo anigoo tagayo miyiga wareysansya dumarka weli sameeyo anigoo weliba abaal marin ay ku faxaan u wado inta aan wareysanyo.
Maxamuud Xaaji Elmi